महिनावारी भएको बेला के सेक्स गर्नै हुन्न त ?
काठमाडौं । मेरो श्रीमान् महिनावारी भएको बेला सेक्स गर्न खोज्नुहुन्छ । महिनावारीमा सेक्स गर्न हुन्छ कि हुँदैन ? यसले महिलालाई शारीरिक हानि त हुने होइन ? धेरै महिला पुरुषहरुमा महिनावारी अर्थात मिन्स भएको बेला यौन सम्पर्क गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने बारेमा जिज्ञासा रहने गरेको छ ।
त्यति मात्रे होइन, महिनावारी भएको बेला यौन सम्पर्क राख्दा चाडो बच्चा बस्छ र समस्या ल्याउँछ भनेर पनि धेरैले चिन्ता राखेको पाइन्छ । यसका बारेमा वैज्ञानिकहरुले गरेको अध्ययनअनुसार महिनावारीको बेलामा यौन सम्पर्क गर्न मिल्छ । तर, सुरक्षित सम्पर्कमा ध्यान दिनुपर्छ । कण्डम लगाएर यौन सम्पर्क गरेमा संक्रमणबाट बच्न सकिन्छ ।
कसैलाई महिनावारी भएको बेला सम्भोग गर्ने मन हुन्छ भने कसैलाई हुँदैन । तर, हाम्रो समाजको चलनचल्तीको कुरा गर्ने हो भने महिनावारीको बेला सम्पर्क गर्नुलाई राम्रो मानिँदैन । परम्परागत भाषामा नछुने भएको सम्म भनिन्छ । तर महिनावारी भएका बेला यौन सम्पर्क गर्न नहुने भन्ने कुनै बैज्ञानिक तथ्य भने छैन ।
महिनावारी भएको बेलामा सम्भोग गर्न हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरामा अझै पनि केही भ्रम पाइन्छन् । महिनावारीका बेला सम्भोग गर्नुहुँदैन भन्ने मान्यता नेपाली समाजमा बलियो छ । पर सरेको बेला बार्ने या चोखोनितो गर्ने संस्कार भएको समाजमा महिनावारीको समयमा सेक्सलाई वर्जित नै गरिन्छ । तर, महिनावारी भएको बेला सेक्स गर्दा कुनै पनि प्रकारको हानी हुँदैन ।
महिनावारी सुरु हुँदा प्रोजेस्ट्रोन भन्ने होर्मोनेले गर्दा पाठेघरमा कन्ट्रयाक्सन सुरु गराउँछ । जसले गर्दा पाठेघरबाट रगतसहित अरु पदार्थहरू महिनावारीको रूपमा बाहिर निस्कछ । महिनावारीको बेला सम्पर्क गर्दा चरमसुखको बेला पाठेघरमा कन्ट्रयाक्सन हुन्छ । जसले गर्दा सम्भोगपछि अरु पदार्थसहित रगत अलि बढी बग्न सक्छ । र महिनावारीको समयावधिलाई पनि कम गर्छ ।
अझ महिनावारीको समय सेक्स गर्न अभ्यस्त जोडीहरूका अनुसार यति बेलाको सेक्स अझ बढी आनन्ददायी हुन्छ । मेडिकल साइन्सका अनुसार महिनावारी भएको बेला सम्भोग गर्दा कुनै हानी हुँदैन । कति पुरुष भने रजस्वला भएको बेला महिलाको योनीमा रगत हुने हुँदा फोहर पनि महसुस गर्छन् । यस बेला सम्भोग गर्न सहज मान्ने, नमान्ने दुवैको चाहनामा भर पर्दछ । यस्तो बेलाको यौन सम्बन्धले आनन्द नआउने कुनै कारण छैन ।
अधिकांश मानिस महिनावारीको समयमा पार्टनरसँग सेक्स गर्न मन पराउँदैनन् । तर, यस्तो बेला सेक्स गर्दा ज्यान दुखेको निको हुन्छ । अनुसन्धानअनुसार महिनावारीको समयमा सेक्स गर्दा पीडामा कमी आउँछ ।